Indlela Yokukhulisa uhobhane wakho
Uhobhane - Isijobelelo Esiyinhloko yotshwala
Uhobhane yizimbali ezomile zomvini we-Humulus lupulus, kusukela emndenini owodwa wesitshalo njenge-Cannabis. Kuvame ukusetshenziselwa njengenye yezithako eziyinhloko ebhiya futhi iveza ukunambitheka okubabayo, okukhathekayo ngenkathi kusebenza njengesilondolozi semvelo. Umvini we-hop ngokuvamile uvame ukukhula futhi ungafinyelela ku-7.6 m ngenkathi, okhiqiza kufika ku-900 g yezimbali ezomile.
Ukulungiselela ukutshala uhobhane wakho
Isinyathelo sokuqala ekukhuleni izinqola zakho ukukhetha ukuthi yikuphi uhlobo lwe-hop oluzokhula njengoba kunezinhlobo ezingaphezu kuka-80 ezihlukahlukene ongakhetha kuzo. Izinhlobonhlobo ze-Hop zihlukaniswa ngezigaba ezintathu: ukuxubha, iphunga kanye nokubili, kuye ngezinhloso zabo ezihlosiwe. Ezinye izinhlobo ze-hop ezithandwayo eNingizimu Afrika zihlanganisa iNdlovukazi yase-Afrika, amaRoma aseNingizimu, i-Southern Passion ne-Southern Star.
Uma usukhethe uhlobo oluhlukahlukene lwe-hop uzodinga ukuthola amanye ama-rhizomes. Ama-rhizomes e-Hop ayingxenye yempande yesitshalo. Zibukeka njengezivini zemivini noma izinti futhi ziqukethe amafihlekile lapho isitshalo esisha singakhula khona. Ama-Rhizomes kufanele ahanjiswe kancane, afakwe esikhwameni seplastiki futhi efriji ukuze ahlale epholile. Zingagcinwa ngale ndlela izinyanga ezimbalwa ngaphandle kokuhlukunyezwa.
Indawo engcono kakhulu yokutshala uhobhane
Uhobhaneudinga indawo evulekile eningi lapho ukhula kakhulu. Akufanele bakhule endlini, ngenxa yalesi sizathu. Indawo ekahle izoba okungenani amamitha amathathu kuya kwanguyisishiyagalolunye esikhala, esingaqeqeshelwa ukukhuphuka isikhala. Kungcono ukufaka isimiso se-trellis sokusekela izintambo njengoba sikhula - akufanele neze uvumele izitshalo zakho zikhule izigxobo zikagesi. Kumelwe futhi kube khona indawo enhle emhlabathini we-rhizomes we-hop ukuze itshalwe imitha ngaphandle kokuhlukanisa okungenani i-1.5 m phakathi kwezinhlobo ezahlukene ze-hop.
Indawo okhetha ukuyitshala kufanele futhi uthole amahora ayisithupha kuya kweziyisishiyagalombili welanga eliqondile nsuku zonke. Kumelwe futhi uhlose ukutshala endaweni egcwele umoya kanye nemithombo emihle. Uma ukugeleza kuyinkinga ungakha igquma le-hop eliphuma emhlabathini nomxube wegridi/wehlabathi ukuze wenze umbhede wokuhlwanyela.
Umhlabathi omuhle kakhulu waHobhane
Uhobhane angaphumeleli uma kunomswakama kakhulu okwamanje. Umhlabathi odibeneyo wobumba uyoholela emanzini amile azobola izimpande futhi abulale isitshalo sakho. Inhlabathi engcono kakhulu yezinhlanzi kufanele ibe yinto evulekile futhi evulekile. Qinisekisa ukuthi ususa yonke i-clumps enkulu, amatshe nokhula emhlabathini ngaphambi kokutshala. Khipha inhlabathi kuze kufike ku-30 ​​cm ejulile. Ungakwazi futhi ukutshala inhlabathi yakho ngesidlo sefu noma ukudla kwegazi. Ngokuvamile, inhlabathi ekhula izithelo nemifino kumele isebenze ukukhula.
Ukuze abakhiqizi bokucacisa, okucacile kwenhlabathi okulandelayo: i-pH ye-5.5 - 8.0, Umzimba jikelele wezakhi lapho i-potassium (K) ne-phosphorus (P) ziphindwe kabili okuqukethwe kwe-nitrogen. I-Boron (B) njenge-mineral trace iyasiza kakhulu ekukhuleni
Isikhathi Esihle Sokutshala uhobhane
Kungcono ukutshala amahlumela ebusika isikhathi esiningi ngaphambi kokuba udinga ukuvuna ehlobo. Ukutshala ama-rhizomes akho kusencane kungcono kunokutshala kakhulu. Ama-Rhizomes angakwazi ukumelana namazinga okushisa aphansi njengo -6 ℃. Izikhathi zokutshala ezihle zivela ngoMeyi kuya kuJulayi.
Indlela Yokutshala uhobhane/ama- Rhizomes
Bamba imbobo ejulile engu-10 cm emhlabathini, cishe ubude be-rhizome ofuna ukutshala. Faka i-rhizome ngokuzenzekelayo emgodini. Bheka eduze i-rhizome futhi uqiniseke ukuthi noma yimiphi izimpande zikhona zibhekene nomhlaba ngenkathi noma yikuphi ukufihla okumhlophe kufakwe esibhakabhakeni. Sebentisa izandla zakho ukuze ubeke phansi umhlabathi phezu kwesihlahla.
Manje ungakwazi ukumboza ama-hops ngendwangu yetshani noma umlenze wokuvikela ukukhula kokhula. Hlola inhlabathi, ugcine unomsoco kuze kube yilapho isitshalo siqala ukukhula.